▷ Sheekada Gacan-qabta Xiliga 5: Wax kasta oo aan ognahay - 【 Isbarbardhigga 】 2022
Sheekada Handmaid's Season 5: Wax kasta oo aan ognahay
Sheekada Gabadha Gacanta: Xogta Muhiimka ah
Waxaa si rasmi ah loo cusbooneysiiyay Xilliga 5aad Diseembar 2020
– Khasab maaha xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay.
- Hulu waxay xaq u leedahay inay samayso dardaaran, marka waxaan ognahay halka ay sheekadu ku socoto si uun.
– Uma badna in Joseph Fiennes uu ka mid noqon doono jilayaasha ugu muhiimsan ka dib dhamaadka xilli ciyaareedka 4.
Sheekada Gacan-qabashadeeda Soo Laabtay Xiliga 5. Kadib dhacdooyinkii naxdinta lahaa ee Dhamaadka Xiliga 4, sheekadu si cad uma dhamaanin Juun (Elisabeth Moss). In kasta oo laga yaabo inuu u soo galay Kanada, hoos u dhacii doorashadiisa Gilecaad ayaa shaki la'aan sii wadi doona inuu sii shaac baxo taxanahan soo socda ee dhacdooyinka, iyo inta safarka jilaha muhiimka ah ee taxanaha waa dhamaaday, qaar badan ayaa weli ku jira dhamaadka bilaashka ah ee xilli ciyaareedka 4 dhamaadka.
Sidaas, Maxaan ka ognahay xilliga 5 ee Sheekada Handmaid's? Tani ma noqon doontaa xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay? Sheekadu ma bilaabi doontaa inay la qabsato buuga dabagalka ee Margaret Atwood ee Axdiga hadda? Aynu dulmarno wax kasta oo jilayaasha iyo hal-abuurayaashu ay ilaa hadda ka sheegeen waxa iman doona iyo halka aan uga tagnay jilayaasha taxanaha ah dhammaadka xilli ciyaareedka 4.
Qaswadayaasha xilliyada 1-4 raac.
Taariikhda la sii daayo: Sheekada Handmaid's Season 5 weli ma hayo taariikh go'an oo la sii daayay; dhab ahaantii, uma eka inay diyaar u yihiin inay filim sameeyaan. Bishii Juun 2021, abuuraha Bruce Miller wuxuu yidhi, "Waxaan bilaabaynaa inaan aruurinno dhogortayada, u yeerno qorayaashayada, oo aan dadka isu keeno si aan isu keeno." Tani waxay soo jeedinaysaa in rasaastu aad u fog tahay. inkastoo dib u cusboonaysiinta taxanaha lagu dhawaaqay December.
Qaybinta: Ku dhawaad ​​dhammaan xubnaha jilayaasha ugu muhiimsan ayaa la filayaa inay soo laabtaan, marka laga reebo Joseph Fiennes.
Soo koobitaan: Sida June u qaxday Kanada, qiime intee le'eg ayay ku bixinaysaa falkii halkaas geeyey? Taasi waa waxa aan rajaynayno in gartiisa uu diiradda saari doono xilli ciyaareedka soo socda.
1 Xiligii Sheekada Gacan -yaraha 5 La Xaqiijiyay
2 Taariikhda Sii -daynta ee Gacan -hayaha Xiligii 5aad
3 The Handmaid's Tale season 5 kabka
4 Sheekada Gacan-yaraha Xilliga 5-aad: Maxaa xigi doona?
5 Imisa xilli ayay ka yeeli doonaan Sheekada Gacan -ku -hayaha?
Xiligii Sheekada Gacan -yaraha 5 La Xaqiijiyay
Hulu wuxuu ku dhawaaqay in Sheekada Handmaid's ay soo laaban doonto xilli ciyaareedka 5 xataa ka hor xilli 4 la sii daayay. Bishii Disembar 2020 muuqaal fiidiyow ah oo Instagram ah, jilaaga ayaa ku dhawaaqay in bandhiggu uu sii deyn doono xilli ciyaareedkiisii ​​afaraad ee 2021. (ka dib ku dhawaad ​​laba sano oo 'sugay tan iyo markii hore la sii daayay), iyo in waxa kale oo jiri doona qayb shanaad.
Afar sano ka dib markii ugu horeysay. Sheekada Handmaid's ayaa weli ah mid ka mid ah bandhigyada asalka ah ee Hulu, markaa la yaab maaha in adeega baahinta uu rabo inuu sii wado ilaa inta ay dadku daawanayaan.
"Waxaan aad ugu mahadcelineynaa Hulu iyo MGM soo laabashada taxanaha xilli ciyaareedkii shanaad iyo, gaar ahaan, taageerayaasheenna daacadda ah taageeradooda," ayuu yiri showrunner Bruce Miller. "Waan ku faraxsanahay inaan sii wadno inaan u sheegno sheekooyinkan, anagoo la kaashanayna kooxdayada iyo shaqaalahayaga cajiibka ah."
Balse su'aasha qof walba iswaydiiyo ayaa ah. Goorma ayaan arki karnaa xilli ciyaareedka 5aad?
Taariikhda Sii -daynta ee Gacan -hayaha Xiligii 5aad
Iyada oo Xilliga 4 hadda la duubay, wali waa goor hore in la sii daayo taariikhda la sii daayay xilli -ciyaareedka soo socda.
Xilligii 4aad wuu ka guuray jadwalka siideynta sanadlaha ah ee bandhigga sababtoo ah dib u dhac weyn oo uu sababay masiibada Covid-19. iyo xayiraadaha ka dhashay soo saarista filimada. Iyada oo arrimuhu si tartiib tartiib ah ugu soo laabanayaan sidii caadiga ahayd, waxaan filan karnaa in sugitaanku ka gaaban yahay labada sano ee joojinta xilli ciyaareedkii hore.
Waxaan rajeyneynaa inaan aragno Sheekada Handmaid's 2022., laakiin waxay u muuqataa inay wali hayaan waddo dheer oo ay ku socdaan, laga bilaabo Juun 2021. Soo saaraha fulinta Bruce Miller ayaa rajo ka muujiyay in xilli ciyaareedka soo socda la samayn karo si ka sii caadi ah marka loo eego xilliga afaraad, taasoo keentay muuqaallo leh jilayaal ka yar intii caadiga ahayd.
"Aad bay u fiicantahay," Miller ayaa u sheegay Deadline markii la waydiiyay sida xilli ciyaareedka 5 uu u socdo.. "Waxaan bilaabaynaa inaan isku geyno dhogortayada oo aan isku keenno qorayaashayada oo aan isu keeno dadka si aan isu keeno."
The Handmaid's Tale season 5 kabka
(Sumcada sawirka: Hulu / MGM)
Inta badan jilayaasha ugu muhiimsan bandhigga ayaa loo qorsheeyay inay ku soo laabtaan xilliga 5 ee Sheekada Handmaid's.Waa kuwan cidda aan fileyno inaan arki doono xilli ciyaareedka soo socda:
Elisabeth Moss sida Juun Osborne
Ann Dowd oo ah Eedo Lydia
Yvonne Strahovski sida Serena Joy
OT Fagbenle sida Luke Bankole
Samira Wiley sida Moira Strand
Madeline Brewer oo ah Janine Lindo
Max Minghella sida Nick Blaine
Alexis Bledel sida Emily Malek
Amanda Brugel sida Rita Blue
Sam Jaeger sida Mark Tuello
Bradley Whitford oo ah Major Joseph Lawrence
Hal dabeecad oo aynaan arki doonin soo laabashada waa Fred Waterford, oo uu ciyaaray Joseph Fiennes., maadaama dhamaadkii xilli ciyaareedkii 4-aad ay ka qaybqaadatay bishii Juun iyo qaar badan oo ka mid ah hablihii la shaqayn jiray oo baxsad u ahaa ciqaabta dembigeeda.
Xilli ciyaareedkii 4, Dabeecadda McKenna Grace Esther Keyes ayaa wax weyn ku soo kordhisay jilayaasha, taas oo inta badan sii ahaan jirtay bilowgii taxanaha.. Xilli ciyaareedkan waxa kale oo uu arkay weji cusub oo joogto ah oo ka muuqda darajooyinka Aunties: Jeananne Goossen sida eedda Ruth. Waa la arki doonaa haddii jilayaashan cusub ay soo laaban doonaan xilli ciyaareedka soo socda.
Marka la eego jilayaasha cusub ee laga yaabo in aan arki karno mustaqbalka, novelolkii asalka ahaa kuma jiraan tilmaamo badan, sida Taxanuhu waxa uu bilaabay wadadiisa ilaa iyo xilli ciyaareedkii 2aad. Si kastaba ha noqotee, tan iyo taxanaha dhigay dhacdooyinkii taxanaha, Dardaaranka, waxaa laga yaabaa inaan aragno wejiyo kale oo Mayday ah oo soo muuqda. Dabcan, Serena ilmaheeda aan la magacaabin ayaa la filayaa, waxaana aad u xiiseyneynaa inaan ogaano cidda xaaska Nick ay ku jiri doonto bandhigga.
Sheekada Gacan-yaraha Xilliga 5-aad: Maxaa xigi doona?
Wareysi uu dhawaan siiyay toddobaadlaha madadaalada, Miller wuxuu ku tilmaamay xilli ciyaareedka soo socda inuu yahay "Doorashada Sophie: Taxanaha.", macnaha in aad dhaafto qof qaatay go'aamadaas foosha xun.
"Waxaan u maleynayaa inaan hore u socono waxaa jira runtii dhowr arrimood". Tani waa sheekada Ameerika: Miyaynu ku soo noqon karnaa sidii caadiga ahayd mise waa inaan u gudubnaa wax cusub? Waa halka ay June joogto hadda. Waxay samaysay wax aad u xun, ama waxay u malaynayso inaan laga soo kaban karin. Ma soo laaban kartaa? Mise waa in aad go'aansatid in mararka qaarkood aadan ahayn in aad hurto qayb ka mid ah noloshaada? Laakiin waa inaad u hurtaa noloshaada oo dhan si aad adduunka uga dhigto meel u wanaagsan jiilka soo socda?
"Oo waxaan u maleynayaa inaysan ahayn beddelka madaxweynaha," Miller ayaa sii wadata. "Ma ahan in sharci la meel mariyo oo kaliya, sida waxa aan hadda sameyneyno; Dagaallada qaar oo aad sii wadataan, dagaal aad sii wadi doontaan.
Miller ayaa sheegay in mustaqbalka ee sheekadu waxay ku saabsan tahay "dagaal dheer" iyo waxa loo baahan yahay si looga adkaado wax laga yaabo inaadan weligaa arkin dhamaadka, kaas oo fure u noqon doona horumarka June sifo ahaan.
Littlefield ayaa sidoo kale ku dartay in bandhiggu uu hadda "dhisayo aasaaska Axdiga.", Taxanaha 2019 ee riwaayadda asalka ah ee bandhiggu ku salaysan yahay, kaas oo MGM Television iyo Hulu ay hore u soo qaadeen xuquuqda la qabsiga telefishinka.
Sida xaaladdu ahayd la qabsiga Sheekada Handmaid's, no way caddahay inta ay run ka yihiin sheekada iyo inta muuqaalka bandhiga hadda socdaa uu saamayn ku yeelan doono is-beddelka. Soo saaraha ayaa qirtay in, "Si daacad ah, weli ma garanayno waxa calaamadaha saxda ah ee wadooyinka ay yihiin. Ma sugi karno inaan helno, laakiin lama qaddarin.
Miller waxa kale oo uu u muuqday in uu xaqiijiyo u dhaqaaqista jihadan cusub markii uu yidhi, "Waxaan dareemayaa in aanu gaarnay meel cidhiidhi ah," iyadoo Xiliga 4 (gaar ahaan dhamaadka) uu mar hore tilmaamayay jihada Wills.
Daqiiqadaha ugu dambeeya ee dhamaadka xilli ciyaareedka 4, June waxay haysaa ilmaha Nicole iyada oo ay wali ku daboolan tahay dhiig ka dib markii ay hogaaminaysay soo bixista Taliyaha Waterford. Luukos markuu gudaha u soo galo, waxa uu dhawr daqiiqado waydiistay gabadhiisa ka hor inta aanu bixin. Ka dib falkan xun ee aargoosiga, June waxay yeelan doontaa inay qariso dhulka hoostiisa, taas oo ah sida aan u helno iyada in ka badan toban sano ka dib Axdiga.
Taxanaha sheeko-xariirku wuxuu ugu horreyn diiradda saarayaa labadeeda gabdhood: Hannah, hadda naag da'yar, waxay weli joogtaa Gilecaad waxayna ku biirtay eeddooyinka si ay uga fogaato inay guursato nin weyn.halka uu kuray Nicole waxaa ku koray Kanada laba hawlwadeen. Mayday oo qarisay aqoonsigeeda dhabta ah.
Xilliga oo dhan 4, Juun waxay ogaadeen in Moira iyo Luke ay aad uga badan yihiin waalidiinta Nicole intii ay ahaayeen, markaa macno ayey u lahaan laheyd iyaga inay u muuqdaan sidii waalidkeed oo kale taxanaha lafdhabarta sidoo kale.
Ciyaartoyga kale ee ugu weyn ee Axdigu waa Eedado Lydia, oo la muujiyey inay ahayd wakiil labanlaab ah oo sirta ah tan iyo waagii hore ee Gilecaad oo, iyada oo da 'weyn,, waxay maamushaa inay dib u midayso labada walaalo ah ee hawsheeda keeni doonta Gilecaad si buuxda. hadalka dhacay. Si ay Hulu u muujiso Lydia oo aanu ognahay in ay isla door isku mid ah ku leedahay is-beddelka, waxa ay u baahan doontaa in ay noqoto qayb dhexe oo taxane ah oo hore u socota, iyada oo u beddelaysa hab-yaqaanka khiyaanada leh ee ay doonayso in ay noqoto. Xilligii 4-aad ee taxanaha, si kastaba ha ahaatee, awooddiisu waxay u muuqatay inay sii yaraanayso.
dabeecad u ah Ma hayno dhamaadka Axdiga waa Serena Joy. Hadda waxay keligeed isku aragtay inay keligeed ku xidhan tahay Kanada, uur iyo ninkeedii dhintay. Mar haddii ICC aysan dambigeeda ku soo ooday Fred, uma badna in mar dhow la sii daayo. Waxaan horey u aragnay dad mudaaharaadyo ah oo u ololeynaya oo ku baaqaya in xorriyaddiisa loo soo celiyo, laakiin markii uu bilaabay inuu mar kale qoro, wuxuu abaabuli karaa warbaahinta si uu ugu baaqo in la sii daayo. Jaceylka Tuello sidoo kale ma ku jiri karaa kaararka?
Ugu dambeyntiina, waa inaan sugno ilaa bilawga duubista xilliga cusub wax badan ka ogow tafaasiisha sheekada ka dambeysa Sheekada Handmaid's Season 5.
Imisa xilli ayay ka yeeli doonaan Sheekada Gacan -ku -hayaha?
Miller wuxuu hore u qirtay ka hor xilli ciyaareedkii 4 in "uusan ogeyn" haddii xilli 5 uu calaamad u yahay dhamaadka taxanaha. "Waxaan ula jeedaa, [Elisabeth Moss] iyo anigu waan ka hadalnay, kooxda tifaftirka iyo aniga wax badan ayaan ka hadalnay halka saxda ah ee aan u socono, laakiin waxaan dareemayaa in sanadkan ka dib ay tahay wakhti fiican oo dib loo qiimeeyo," sharaxay.
Soo saaraha taxanaha Warren Littlefield ayaa sidoo kale u xaqiijiyay Bustle in Miller uusan ahayn kaftan marka uu dhaho ma garanayo."Waxaan kuu sheegi karaa, haddii aad lahaan lahayd Bruce Miller Sodium Pentothal, waxaad yeelan lahayd 'Ma garanayo,' sababtoo ah ma garanayno. Inkastoo uu xaqiijiyay: "Waxaan ku dhowaanaynaa dhamaadka, laakiin weli ma garanayno."
Si kastaba ha ahaatee, Miller ayaa sidoo kale ku daray in uu sii wadi doono taxanaha ilaa inta Moss uu la socdo isaga. "Ilaa inta ay Lizzie sidan igu samaynayso, waan sii wadi doonaa," Miller ayaa u sheegay Deadline. “Nolol badan ayaa ku jirta sheekadan. Runtii aad baan ula dhacsanahay waxa ka dhacaya Axdiga iyo haddii ay qayb ka tahay mustaqbalkayaga waa su'aal ka weyn."
Sidaa darteed, sheekadani waxay umuuqataa mid waddo dheer loo maro.